Noce - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Dammaanad la'aan
Tag: Blockchain, Macdanta Bitcoin, nuncio, Caddeynta Shaqada
Un nuncio waxaa loola jeedaa lambar ama qiime hal mar uun la isticmaali karo.
Xargaha waxaa badanaa loo isticmaalaa hab maamuuska xaqiijinta iyo gudaha hawlaha hash cryptographic. Macnaha guud ee teknolojiyadda blockchain, Noce waxaa loola jeedaa nambarka khiyaanada khiyaanada ah ee loo isticmaalo ka soo horjeed ahaan inta lagu jiro hawsha soo saarista.
Tusaale ahaan, macdan qodayaasha Bitcoin waa inay isku dayaan inay qiyaasaan wax aan jirin oo sax ah iyagoo isku dayaya isku dayo badan si ay u xisaabiyaan xashiishka xashiishka ee buuxiya shuruudaha qaarkood (tusaale ahaan, wuxuu ku bilaabmayaa tiro eber ah). Markaad u tartameyso macdanta cusub, macdanta ugu horeysa ee hesha wax aan jirin oo keenta xashiish sax ah waxay xaq u leedahay inay ku darto baloogga xiga ee xannibaadda - waana lagu abaalmariyaa sidaas.
Si kale haddii loo dhigo, habka macdanta waxay ka kooban tahay macdan qodayaal fulinaya shaqooyin tiro badan oo haash ah oo leh qiyamyo fara badan oo kala duwan ilaa wax soo saar sax ah laga soo saarayo. Haddii macdanta soo saarta ee halista ah ay ka hoos marto heerka loo cayimay, baloogga waxaa loo arkaa inuu ansax yahay waxaana lagu darayaa xannibaadda. Haddii wax soo saarku uusan ansax ahayn, macdan qodayaasha ayaa sii wadaya inuu isku dayo qiyam kala duwan oo aan ahayn Marka baloog cusub si guul leh loo soo saaro oo loo ansaxiyo, hawshu way bilaabmaysaa.
In Seeraar - iyo inta badan Cadaynta Nidaamyada Shaqada - tirakoobku waa uun lambar aan kala sooc lahayn oo ay macdanta u isticmaalaan inay ku dhex wareejiyaan waxsoosaarka xisaabtooda xashiishka. Macdan qodayaasha ayaa shaqaaleeya qaab tijaabo iyo qalad, halkaas oo xisaab kastaa uu qaato qiime cusub oo xarig ah. Waxay tan u sameeyaan sababta oo ah suurtagalnimada in si sax ah loo qiyaaso ficil aan jirin ayaa ku dhow eber.
Iskucelceliska tirada isku dayga hash waxaa si otomaatig ah loogu hagaajiyaa borotokoolka si loo hubiyo in baloog kasta oo cusub la soo saaro - celcelis ahaan - 10kii daqiiqaba. Nidaamkan waxaa loo yaqaan hagaajinta dhibaatada waana waxa go'aaminaya marinka soo saarista (ie, imisa eber oo xashiishka xashiishka ah waa in loo tixgeliyaa inuu ansax yahay). Dhibaatada soo saarida baloog cusub waxay la xiriirtaa xaddiga awoodda halista (heerka xashiishka ama xammaal) ku hawlan nidaamka xannibaadda. Awoodda halista badan ee loogu talagalay shabakadda, ayaa sareysa marinka, taas oo macnaheedu yahay in awood badan oo xisaabeed loo baahan doono si ay u noqoto mid tartan iyo guuleyste qodan. Taa bedelkeeda, haddii macdan qodayaashu ay go'aansadaan inay joojiyaan macdanta, dhibaatada waa la hagaajin doonaa oo marinku wuu hoos u dhici doonaa, sidaas darteed awood xisaabeed yar ayaa looga baahan doonaa anigaa iska leh, laakiin borotokoolka ayaa ka dhigi doona jiilka xannibaadda inay raacaan jadwalka 10 daqiiqo, iyadoon loo eegin.
Waa maxay Flippening ee adduunka ee Cryptocurrencies?